Erechtheion, ilay tempoly malaza eo amin'ny Acropolis of Athens | Vaovao momba ny dia
Erechtheion, ilay tempoly malaza eo amin'ny Acropolis of Athens
El Erechtheum Io no anaran'ny tempoly grika taloha izay mijoro eo amin'ny ilany avaratry ny Acropolis Athens. Heverina ho sangan'asa maritrano Ioniana, io tempoly io dia naorina teo anelanelan'ny 421 sy 406 tal. C. avy amin'i Mnesicles, mba hanoloana ny tempolin'i Athena Polias taloha, izay noravan'ny Persiana nandritra ny ady ara-pitsaboana tamin'ny 480 BC. C.
Ity tempoly ionic kanto ity dia nahitana toeram-pivavahana isan-karazany; nandritra ny tantara dia trano fiangonana, lapan, harem ary trano fitehirizam-bokin'ny miaramila izy io. Vita tamin'ny marbra pentelika, io tempoly io no fananganana farany manan-danja indrindra natao teo amin'ny Acropolis ary fantatra manerantany noho ny fananany ny Porch of the Caryatids. Ny Erechtheion dia unicum, tempolin'i Ionic misy maodely manokana, ary ny mpanao mari-pahaizana, Mnesiklés, dia niatrika ireo olana lehibe napetraky ny topografia sy ireo valindrihana hajaina amin'ny fitoerana masina taloha mifandraika amin'ny fahakingan'ny Acropole.
Ny Erechtheion dia nametraka ireo antokom-pinoana antitra indrindra tao an-tanàna, ary natokana ho an'ireo andriamanitra Athena Polias, Poseidon sy Hephaestus ary Erechtheus, ilay mpanjaka angano an'ny Atenas, izay novonoin'i Poseidon ary nalevina tao amin'io toerana io. Ity tempoly Ateniana ity dia manana sela roa tsy miankina sy tsy ara-dalàna noho ny tsy fitovian'ny tany ankoatr'ireo portico telo tsy mitovy. Ny avaratry ny avaratra dia miavaka amin'ny haavon'ny tsanganana sy ny hatsaran'ny renivohitra. Ny portico amin'ny lafiny atsimo dia malaza amin'ny fananana caryatids enina na korai.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Erechtheion, ilay tempoly malaza eo amin'ny Acropolis of Athens
Kuddelfleck, lovia nasionalin'ny Luxembourg